MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Imaaraadka ayaa si kulul u cambaareysay weerar ismiidaamin ah oo shalay ka dhacay inta u dhaxaysa Afgooye iyo Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof.
War qoraal ah oo ay soo saartey maanta wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka, ayaa tacsi loogu diray qoysaska iyo ehelada ay dhibaatada kasoo gaartey qaraxa ka dhacay Bood Boodka, duleedka Afgooye.
Imaaraadka ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo nooc kasta falalka argagaxisada, ee lagu khal-khal gelinayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, islamarkaana lagu dilayo dad shacab ah, oo aan waxba galabsan.
War-Saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dowladda Imaaraadka ay taageero la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed, iyadoo caafimaad deg deg ah loo rajeeyay dadkii ku dhaawacmey weerarkii shalay.
Ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhaawacantay, oo ay ku jiraan 6 u dhashay dalka Turkiga, kuwaasoo ka shaqeynayay dhismaha jidka isku xira magaaladda Muqdisho iyo degmada Afgooye, kaasoo ay maal-gelinayso dowladda Qatar.
Waa weerarkii labaad oo tan iyo bishii lasoo dhaafay lagula eegtay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye shaqaalaha Turkiga, iyadoo Al-Shabaab ay sheegatay mas’uuliyadda labadii qaraxa ee ugu dambeeyay.
Al-Shabaaba ayaa ku sheegtay sababta ay ku beeganayso muwaadiniinta Turkiga inay dowladooda ay taageero military siiso dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana ay ku eedeysay inay boobeyso khayraadka dalka.
Midowga Africa ayaa qorsheynaya in Ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya la baxo marka la gaaro sanadka...
Qarax is-miidaamin oo ka dhacay afaafka xerada Turkiga ee Muqdisho
Soomaliya 23.06.2020. 09:24